Archive du 28/03/2012
65 taona aty aorian'ny tolom-panafahana tamin'ny 1947 dia hafahafa ihany ny fizotry ny tantara.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Ralaiseheno Guy Maxime
�Hikorontana ambony ambany eto�
Hihazakazaka ho any Manakara hankalaza ny 29 Martsa i Andry Rajoelina nefa ny mpiaradia aminy tsy iza fa mbola ireo zanak�ireo nanao vonomoka ny Malagasy, hoy ny CST Rakotonomenjanahary Jean Ernest.
Razafimadimby Zafilahy Stanislas
�Ny fibebahan�i Andry Rajoelina no hampilamina antsika�
Nabaribarin�ny filoha lefitry ny Kongresin�ny tetezamita avy any amin�ny Faritanin�i Toamasina, Razafimandimby Zafilahy Stanislas tao amin�ny kianjan�ny Magro Behoririka indray omaly, niainga avy amin�ilay resaka nataon-dRajoelina tao amin�ny fahitalavitra TV Plus tamin�ny zoma 23 martsa teo fa vao misy fofompofona Deba, Zafy na Ravalomanana dia ailikilika ny resaka.
Ahetsikareo indray izany ny bebaoty sy ny namany araka ny hafatrao tamin�ny zoma ry Jean � !
Ambodiatafana Vita ny fanarenana ny tranon-dRatsiraka
Araka ny vaovao nampitain�ny fiadidiana ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany dia fotoana vitsy sisa dia azo ipetrahana ny tranon�ny amiraly Ratsiraka ao Ambodiatafana, Toamasina II.
Lasibatra sahady ilay �ch�que carburant� vaovao
Na dia nisondro-bidy hatrany amin�ny 200 Ariary aza ny vidin-tsolika dia mbola milaza ho tsy afa-po hatrany ireo mpaninjara.
Namono olona indray ny polisy
Vono olona nahatsiravina indray no nitranga teny Mahazoarivo akaikin�ny Lapan�ny Primatiora ny alin�ny alatsinainy 26 martsa tokony ho tamin�ny 11 ora. Polisin�ny FIP no nahavanon-doza.
Mpiasa mitokona ao Ambatovy
Voarahona hatramin�ny mpanao gazety
Fitakiana ny fampidirana azy ireo hiasa indray eo anivon�ny tetikasa Ambatovy no fototry ny fitokonana andian�olona mibahana ny lalana mihazo an�i Tanandava Toamasina misy famokarana nikela sy kobalta an�ny tetikasa Ambatovy.
Tsiaro ny 29 martsa
Samy hanao ny azy
Tsy hamela handalo fotsiny ny andron�ny 29 martsa ireo tia tanindrazana ao an-drenivohitr�i Vakinankaratra fa hanamarika izany ihany koa.
Dikan-teny, dika vilana !
Tahaka ny tamin�ny fifanarahan�i Maputo sy Addis Abeba, ireo karazana fehin-kevitra navoaky ny SADC hatramin�izay, na ny avy amin�ny fihaonana an-tampon�ireo filoham-pirenena io na ny nambaran�ny Troika-SADC, dia mbola hifandroritana ihany koa ny fandikana ny tondrozotra sy ny �m�morandum�, mbola avy amin�ny SADC ihany.
Amin�ity alarobia ity no hanao ny fianianany etsy amin�ny fitsarana ambony Anosy ny filohan�ny CENIT na vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana, Rtoa Attalah B�atrice.